Ikhiphedi enezinombolo iyasebenza lapho kulayishwa i-KDM | Kusuka kuLinux
Ikhiphedi enezinombolo iyasebenza lapho kulayishwa i-KDM
Amathiphu anentshisekelo engiwathola ku- ISITOLO esingasebenzisa ngayo ikhibhodi yezinombolo ku- I-KDM (yize umbhali wayo eqinisekisa ukuthi ukubheka okuncane, kungasetshenziswa kwabanye abaphathi beSession abanjengo I-GDM o I-LightDM).
Okufanele sikwenze ukufaka iphakheji inombolo:
Ngemuva kwalokho, sisebenzisa isihleli sombhalo sihlela ifayili / njll / kde4 / kdm / Xsetup
Ukungeza okulandelayo ekugcineni kwefayela
Mina, ifayili belimi kanjena:
Ngemuva kwalokho, ukuvivinya ukuthi konke kusebenza, siqala kabusha ikhompyutha, nalapho silayisha I-KDM, ikhibhodi yethu yezinombolo izokwenziwa isebenze.
Kungenzeka ukuthi kokunye ukusatshalaliswa kweNoDebian indlela yeXsetup izoshintsha
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ikhiphedi enezinombolo iyasebenza lapho kulayishwa i-KDM
Yimina noma lokhu kungenziwa futhi kusuka kumenyu yokuncamelayo? Okungenani nginokungena ngemvume okuzenzakalelayo futhi ngaso sonke isikhathi lapho ngifaka kusebenza ngokuzenzakalela kepha angazi ukuthi kuzosebenza yini lapho ngikumphathi weseshini
Ku-fedora okungenani ungayisebenzisa kusuka kokuncamelayo kwe-KDE, okungenani ngiyisebenzisile kanjena.
Akukhona ukuthi i-KDE ibilungiswa kahle? Ngisazama ukuvula umculo wokungena ngemvume ku-Chakra ¬¬
Ndoda, ngabe usuvele uye kokuncamelayo kwesistimu »Izaziso zohlelo nezokusebenza» Umthombo womcimbi »Indawo yokusebenza ye-KDE» Ukufinyelela futhi ungahloli inketho ethi Dlala Umsindo?
NgiseChakra futhi inketho ethi "KDE Workspace> Access" ayiveli, eminye imicimbi iyavela, okwamanje shiya "okukhethwa kukho komdlali" ngokuthi "akukho okukhipha umsindo", sizobona futhi sibonge
Angikwazi ukuthola ifayela le-Xsetup 🙁
KuSabayon iku- / usr / share / config / kdm
I-Pimagizer: ithuluzi lokukhulisa izithombe zakho